Xavier Vilajoana oo ka hadlay wararka la xiriira in Lionel Messi uu ka tagayo kooxda Barcelona – Gool FM
Xavier Vilajoana oo ka hadlay wararka la xiriira in Lionel Messi uu ka tagayo kooxda Barcelona
(Barcelona) 19 Agoosto 2020. Agaasimaha kooxda Barcelona ee Xavier Vilajoana ayaa sheegay in mashruucan cusub ee Blaugrana uu hogaamin doono laacibka reer Argantina ee Lionel Messi.
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa maanta ku dhawaaqday inay dhameystirtay heshiiska macalinka reer Holland ee Ronald Koeman, isagoo noqonaya badelka Quique Setien.
Xavier Vilajoana oo ka hadlayey mustaqbalka Lionel Messi ee kooxda Barcelona ayaa wuxuuna yiri:
“Messi wuxuu doonayaa inuu ciyaaraha kaga fariisto Barcelona, waxaan ka shaqeyneynaa inaan sameyno isbeddelada lagama maarmaanka ah oo aan ku farxad galineyno isaga, isla markaana aan ku dhisi doono kooxda adag”.
“Runtii anaga kuma fikireyno suurtagalnimada ah in Lionel Messi uu kooxda ka tago, sababtoo ah wuxuu awoodaa inuu u ciyaaro Barca ilaa da’da 40”.
“Waxa ugu horeeya ee Ronald Koeman uu doonayo inuu sameeyo ayaa ah la hadlida Lionel Messi, wuxuuna aaminsan yahay inuu yahay hoggaamiyaha mashruucan”.
“Messi wuxuu mar walba sheegaa inuu ku faraxsan yahay kooxda Barcelona, taasina waa waxa nagu dhiirogalinaya inaan sameyno koox cusub ee isaga ku hareereysan” ayuu yiri Agaasimaha kooxda Barcelona ee Xavier Vilajoana.
RASMI: Mid ka mid ah xiddigaha Real Madrid oo ku biiray Kooxda Borussia Dortmund